Kala duwan oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone (Bogga 7)
Apple waxay dooneysaa horumariyayaashu inay ka faa'iideystaan ​​dib u eegista API-ka ee iOS 10.3
Apple waxay dooneysaa inay ku dhiirrigeliso shaqadan cusub ee ka dhexeysa kuwa horumariya, tanina waa hindisaha ay ku qaadaneyso inay ku qasabto inay sidaas sameeyaan.
Apple waxaa dacwad ku soo oogay qof shil ku dhacay isagoo isticmaalaya iPhone
Hadda xisbiga dhaawacmay wuxuu go'aansaday inuu Apple ka dacweeyo maadaama uusan hirgelin tiknoolajiyada ka hortagga wadista inta la isticmaalayo iPhone.
Apple waxay dhejin kartaa rikoor cusub oo dakhli ah usbuuca soo socda
Sannadkii hore uma fiicnayn Cupertino, laakiin rikoodh cusub oo faa'iido ayaa durba la filayaa rubuca hore ee 2017.
Isticmaalayaasha ayaa si cad ugu sharxaya USB-C-ga iPad-ka
Dadku way hadleen, adeegsadayaashu waxay doorbidayaan USB-C inay yihiin fiilada loo qoondeeyey qalabka iOS,
Apple waxay mudnaanta siineysaa hagaajinta Siri ee iPhone 8 cusub
Shirkadda Cupertino waxay si dhab ah uga shaqeyneysaa hagaajinta awoodda Siri ee iPhone 8 iyo noocyada soo socda ee iOS.
Samsung waxay dhacaysaa sanadkii saddexaad oo isku xigta ee mugga iibka, waxayna ka hooseysaa tirakoobyada ay shirkaddu dib ugu soo celisay 2012.
Netatmo waxay na siisaa xal dhammaystiran oo lagu xakameeyo xaaladaha cimilada ee bannaanka iyo sidoo kale xaaladaha gudaha guriga ka jira
WhatsApp waa la cusbooneysiiyaa oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dirto farriimaha qad la'aanta, iyo waxyaabo kaloo badan
Kani waa mid ka mid ah wararka ay WhatsApp ku soo bandhigto cusbooneysiintan ugu dambeysay, soo gal oo waan kuu sheegi doonaa.
Maxay dawladaha oo dhami u door bidaan Apple marka laga reebo Maraykanka?
Dowladda Boqortooyada Ingiriiska, Isbaanishka iyo xitaa Ruushka waqtiyadii lasoo dhaafay, waxay Wasiiradooda siiyeen Ipad, aalad u muuqaneysa inaan laga maarmin.
Saddexda maamule e-mayl ee ugu wanaagsan IOS
Aynu eegno kuwaas oo ah saddexda maamul ee ugu wanaagsan ee iimeylka loogu talagalay IOS ee loogu talagalay iPhone News.
Maxaad sameyn laheyd kahor iibinta iPhone-kaaga?
Waxaan sameyn doonnaa iskudubarid yar dhamaan talaabooyinka ay tahay inaad qaado kahor intaadan ku wareejin iPhone-kii hore milkiilaha cusub
Shirkadda Qualcomm ayaa ka jawaabaysa eedeymihii ugu dambeeyay ee uga yimid shirkadda Apple
Tani waa jawaabta ay Qualcomm siisay Apple eedeymihii ugu dambeeyay.
LifeProof wuxuu u bilaabayaa NUUD cusub iphone 7 iyo 7 Plus
LifeProof wuxuu ku dhawaaqayaa kiisaskiisa cusub ee iPhone 7 iyo 7 Plus oo leh naqshad cusub iyo horumarin xagga maqalka ah, lagana ilaalinayo dhicitaanka iyo quusin
Apple Music waxay bixisaa sumado ka badan kuwa loo yaqaan 'Spotify'
Apple Music waxay siisaa fanaaniinta lacag aad u badan oo ka mid ah durdurrada heesahooda marka loo eego adeegyada sida Spotify.
Iyadoo la adeegsanayo iOS 11, wicitaanada kooxdu waxay imaan karaan Face Time, sida ay xanta sheegayaan
Sida ku xusan wararka xanta ah ee imaatinka iOS 11 waxaan ku raaxeysan karnaa wicitaanada kooxda ee FaceTime
Apple waxay ku dacweysay shirkadda Qualcomm $ 1.000 bilyan
Shirkadda Qualcomm ayaa laga yaabaa inay ka soo ururiso boqortooyada shirkadda Apple wixii ay ahayd inaynan haysan.
Waa maxay sababta haddii aad u iibsato iPhone shirkad ahaan waxaad kaliya haysataa damaanad qaad hal sano ah?
Waxaan taabaneeynaa mowduuc mugdi kujiro oo kudhamaaday abuurista muran badan maalmihii lasoo dhaafay labadaba ...
WarFriends, la dir asxaabtaada ciyaartan ficil xeeladeed
Aynu halkaas u aadno markaa WarFriends, ciyaarta oo dareen ku abuuraysa macruufka "App Store" ee isku dhafan tallaabada iyo istiraatiijiyada toogashada
Sida loo ogaado haddii "Wi-Fi Taageerada" ay dheecaan kareyso heerkaaga xogta
Maanta waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida loo ogaado haddii "Wi-Fi Assistance" ee qeybta dejimaha ay macno ahaan u cunayaan heerkaaga xogta
Barnaamijka Dhameystirka Jiilka Koowaad ee Apple Nano iPod Nano
Apple wuxuu dhammeeyaa barnaamijka beddelka batroolka jiilka koowaad iPod Nano, inkasta oo uu sii wado inuu beddelo qaar ka mid ah kuwa aan isbeddelin.
GarageBand 2.2 oo loogu talagalay macruufka ayaa la yimid tanno qaabab cusub ah
Nala joog oo si dhakhso leh u ogow waxa ku cusub GarageBand 2.2 ee iOS iyo macOS markaad jaleecdo.
Saamiyada Apple ma aheyn kuwa sareeya tan iyo 2015
Dhabar jab cusub oo ku yimid falanqeeyayaasha, saamiyada shirkadda Cupertino ayaa aad u sarreeya sidii ay ahaayeen dhammaadkii 2015.
Apple wuxuu kudarayaa QZSS qeexitaanada iPhone 7 iyo 7 Plus
Apple waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso tilmaamaha IPhone 7 iyo 7 Plus ee lagu muujiyay degelkeeda si ay u muujiso taageerada QZSS.
Dacwad ficil ah oo loogu talagalay Apple si ay u xirto iphone-ka markii ay gaariga galeyso
Tani horeyba waa mowduuc soo noqnoqonaya inbadan oo idinka mid ahna waad hubtaa inaadan taaban ...
IOS 10.2 ma awoodi doontid inaad ku ciyaarto DVD-yadaada dooxay iTunes
Waxay u muuqataa inay cunayso suurtagalnimada in macruufka 10.2 isticmaaleyaashu aysan ku ciyaari karin DVDyadooda dillaacsan maktabadda iTunes.
Injineerkii hore wuxuu ku eedeeyay Apple inay ka caajisay Tim Cook
Bob Burrough, oo ah injineer hore ee shirkadda Cupertino oo ku eedeeya "caajis" maadaama ay gacanta ugu jirto Tim Cook.
Bozoma Saint John wuxuu ballan-qaadayaa waxyaabo aad u gaar ah oo ku saabsan Apple Music
Hawl fuliyayaashu waxay soo bandhigeen qaadooyin xiiso leh oo ku saabsan waxa ku soo dhacaya goobta muusikada ee shirkadda Cupertino.
Evernote wuxuu xawaare ku kasbaday nooca cusub
Marka ay raadineyso in shaqsi kasta laga dhigo mid abaabulan oo wax soo saar leh, codsiga caan-qaadashada ah ee Evernote…
Khariidadaha Google ayaa kuu sheegi doona halka la dhigto
Khariidadaha Google ayaa kol hore kuu sheegi kara sida ay cidhiidhiga taraafikada u noqon doonaan jidka aad mari doontid, laakiin ……
Lisa Jackson oo ka tirsan Apple waxay ka mid tahay 25 xubnood oo ku soo biiray guddiga cusub ee iswada ee waaxda gaadiidka ee Mareykanka.
Dhibaatooyinka iPhone 7? Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu badan ee guuldarrooyinka iyo sida loo xalliyo si iPhone 7 kaaga uu si fiican ugu shaqeeyo.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka gaabiska ku jira soo degsashada App Store
Taasi waa sababta maanta aan dooneyno inaan ku siino xoogaa talooyin ah si aad u xalliso dhibaatooyinka la soo degsashada ee ku yaal App Store iOS.
Samsung VP waxay ku dhacday fadeexad musuqmaasuq oo halis ah
Waxay umuuqataa in Madaxweyne kuxigeenka Samsung uu ahaa domino ku xigta oo dhacda kadib markii madaxweynaheeda loo xiray fadeexada musuqmaasuqa.
Appstore wuxuu korayaa 60% intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay ee 2016
Dukaanka App wuxuu koray qiyaastii 60%, isaga oo aad uga sii fogaanaya kana sii fogaanaya tartanka ugu weyn, Google Play.
Shan dhibaato oo dhinac saddexaad ah oo aad u wanaagsan Apple Watch-kaaga
Halkan waxaan la tagnaa shan dhibaato weyn oo dhinac saddexaad ah oo ku saabsan Apple Watch-kaaga kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku darto macluumaad dheeraad ah saacaddaada adoo jaleecaya.
Rome: Wadarta Dagaalkii - Duulaankii Dadka Barbariyiinta ah ee ku soo wajahan iPad bisha Maarso
Ma jeceshahay ciyaaraha istiraatiijiyadeed? Hagaag, waad ku farxi doontaa inaad ogaato in Rome: Wadarta Dagaalkii-Duullaankii Barbarian uu imanayo iPad-ka bisha Maarso.
Shahaadooyinkan waxay muujinayaan sida AirPod-yada iyo Bluetooth-keedu u shaqeeyaan
Si loo gaarsiiyo natiijooyinkaan Apple waa inay si adag u shaqeysaa oo nidaamyo patent ah sida kan aan hoos ku aragno.
Khariidadaha Google ayaa la cusbooneysiiyay oo is-beddelka marinku isbeddelay
Cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay macruufka oo waxyar ka beddeleysa isugeynta hagaha oo ay ku jirto isdhexgal dhammaystiran oo Uber ah
Yu-Gi-Oh! Duel Links oo hadda laga heli karo Mareykanka iyo Kanada
Yu-Gi-Oh! ku calaamadeeyay carruurnimadeenii ciyaartii kaararka caanka ahayd. Oo waxay ahayd hab fudud oo dhakhso leh oo ...
Shaqo ka eryida Motorola-Lenovo iyo kireysiga Apple
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan bixitaanka injineerada Apple ayaa ka soo muuqday warbaahinta maalmahan waxay soo saareen qaar ...
Bowers & Wilkins P5 Wireless, codka maqalka ee wireless
Waxaan falanqeyneynaa Bowers & Wilkins P5 sameecadaha dhegaha la ', mid ka mid ah moodooyinka ugu tayada sareeya qaybtooda iPhone-ka
Tilmaamo si aad u ilaaliso AirPod-yadaada nadiif (iyo nadiif)
Waxaan bixin doonnaa dib u eegis kooban oo ku saabsan farsamooyinka nadaafadda oo kuu oggolaan doona inaad had iyo jeer diyaar u ahaato AirPod-yadaada.
Waad ku badali kartaa lacagtaada lacagaha qalaad isku dheelitirka iTunes ama lacagaha ku jira PayPal
Garoomada diyaaradaha qaarkood waxaad dhawaan awood u yeelan doontaa inaad lacagtaada ku bedesho lacag qalaad si aad isugu dheelitirto iTunes ama lacagaha ku jira PayPal.
Xiritaanka Isxaaq: Dib-u-dhalashada ayaa ku soo noqotay App Store sanad kadib
Xiritaanka Isxaaq: Dib-u-dhalasho, oo laga mamnuucay iOS App Store sanad ka hor, ayaa dib ugu soo laabtay muuqaallo dib loo habeeyay.
IPad Air 2 wali waa iibsi fiican maanta
Tan waxaan uga jeednaa in iPad Air 2 ay wali tahay kiniin ku siinaya adiga wax kasta oo qalab kasta oo iOS ah.
Podcast 8 × 17: Laga bilaabo 2017 rajo wanaagsan
Sannad-guurada tobnaad ee iPhone-ka wuxuu ku bilaabmaa rajo aad u wanaagsan. IPhone leh naqshad cusub, iyo Mac iyo iPad cusub oo isha lagu hayo
Foxconn waxay ku dhawaaqeysaa Khayaanada Dakhliga Sababtoo ah Soosaarid Yar oo iPhone 7 ah
Foxconn waxay ku dhawaaqeysaa in sanadkii la soo dhaafey ay heshay dakhli ka yar intii caadiga ahayd sababtoo ah iibkii yaraa ee iPhone 7.
Castle Creeps TD, ciyaar kale oo istiraatiijiyad ah oo kacaan ka beddeleysa macruufka
Macluumaadka 'App App' ee 'iOS App Store' ayaa si isa soo taraysa uga buuxa ciyaaraha fiidiyowga, iyo nooc ku dhaca si aad u adag, u fiirso ...
Apple waxay soo bandhigeysaa rubuckeeda koowaad ee maaliyadeed ee 2017 Janaayo 31
Janaayo 31 ayaa loo xushay inay soo bandhigto rubuca maaliyadeed ee ugu horeeya sanadka 2017 maalgashadayaasha Apple. Waxaa jiri doona lama filaan?
Abkan wuxuu noo ogolaanayaa inaan helno AirPods hadii aan wayno
Finder for Airpods, waa codsi balan qaadaya inuu heli doono samaacadahayaga hadii aan waayno.Ma noqon doonaa mid waxtar leh mise waa khiyaanada ugu dambeysa?
Dukaanka London ee 'Selfridges', oo loogu talagalay Apple Watch, ayaa sidoo kale xirmaya
Haddii aan tixgelinno in dukaanka Selfridges ee London, oo loogu talagalay Apple Watch, uu xirmay, iibinta Apple Watch miyey xun yihiin?
Waxa aan Apple ka filayo 2017
Waxaan bilaabeynaa sanad oo rajooyinku ay yihiin kuwa ugu sarreeya, oo leh sannad-guurada tobnaad ee iPhone iyo dhowr sano oo aan sugeyno cusbooneysiinta Macs.
Synaptics wuxuu soo bandhigayaa nidaam mobiil ah oo isku daraya dareeraha faraha iyo aqoonsiga wajiga
Waxyar ka hor CES 2017, Synaptics waxay soo bandhigtay nidaam isku mid ah laftiisa oo ah dareeraha faraha iyo aqoonsiga wajiga.
Shanta heer ee ugu adag Super Mario Run
Super Mario Run wuxuu suuqa ku jiray waqti aad u kooban hadana durba wuxuu urursaday dhaleeceyn badan, labadaba ...
Runta Ku Saabsan Daahfurka "Exclusive" ee Super Mario Run
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno sababta Nintendo u soo bandhigtay "gaar ah" Super Mario Run ee loogu talagalay macruufka iyo waxa loogu tala galay
Cajiib Codka Duubista Pro, oo iib ah waqti xadidan
Awesome Voice Recorder Pro waa cod-bixiye xirfad yaqaan ah oo duuba iPhone, iPad iyo Apple Watch oo hadda lagaa dhimi karo boqolkiiba afartan
Samsung ayaa bilaabi doonta AirPods u gaar ah Galaxy S8
Samsung kama saareyso oo keliya mashiinka dhagaha ee S8 ee soo socda laakiin sidoo kale waxay soo saari doontaa dhagaha dhagaha oo la mid ah AirPods.
Xaqiijinta Apple waxay soo jeedinayaan in Apple Watch Digital Crown uu sidoo kale imaan doono iPhone-ka
Sida laga soo xigtay dhowr shatiyada Apple, mustaqbalka waxaan yeelan doonnaa iphone iyo ipad leh Digital Crown la mid ah kuwa Cupertino ay ku soo bandhigeen Apple Watch.
Lightricks waxay ku soo noqotaa khilaafka iyadoo la socota daabacaadda labaad ee Facetune, iyadoo la soo bandhigayo iibsi cusub iyo ikhtiyaarrada lacag bixinta ee niyadjabaya dadka isticmaala
IPhone 7 Jet White oo lagu soo bandhigay muuqaalka Sonny Dickson
Ma jeceshahay dhalaalka iPhone 7 Jet Black laakiin miyaad ka door bidaysaa midab cad? Waa hagaag, iPhone 7 Jet White ayaa ka muuqday fiidiyowga.
Apple waxay si qalad ah ugu dirtaa laba AirPods saxan kumanaan isticmaale
Shirkada Cupertino ayaa si qalad ah ugu dirtay laba dhagaha samaacadaha midig kumanaan isticmaale ah oo bilaabay inay ka dhex guuxaan shabakadaha
Kooxda Apple ee Sirdoonka Artifishalku waxay bilaabayaan horumarinta mashaariic
Daraasadihii ugu horreeyay ee kooxdan takhasuska leh ee Sirdoonka Artificial waxay bilaabeen inay muujiyaan natiijooyinka shirkadda Cupertino.
Apple wuxuu xoojiyaa xiriirkiisa Foxconn: wuxuu abuuraa xarumaha R&D ee Shiinaha iyo Indonesia
Uma maleynayo in Donald Trump uu jecel yahay tan: Apple wuxuu ka abuuray Shiinaha & Indonesia xarumo R&D ah, kuwaas oo u adeega xoojinta xiriirka ay la leeyihiin Foxconn.
Fiidiyowyadan ayay Apple damacsan tahay inay kusoo jiidato akhristayaasha Game of Thrones
Sidii aan horeyba ugu sheegnay bishii Sebtembar, Apple wuxuu bilaabay inuu daabaco taxane buugaag is-dhexgal ku leh iBooks ...
AirPods laga soo iibsaday Apple Store khadka tooska ah waxay imaan doonaan waqti ka hor sidii la filayay
Dhowr shirkado AirPods ah oo ka iibsanaya Apple Store khadka tooska ah waxay bilaabaan inay helaan farriimaha dhoofinta muddo dheer ka hor toddobaadyada 6 ee Apple qiyaasay
Saacadda Apple ee mustaqbalka waxay noqon kartaa mid khafiifsan mahadnaqa jijimooyinkan leh jawaab-celinta
Sida ku cad shatigan, saacadda Apple Watch ee mustaqbalka way khafiifin kartaa iyadoo ay ugu wacan tahay jijimooyin leh jawaab-celinta. Mustaqbalka ma arki doonaa?
Sida laga soo xigtay Midowga Yurub, Facebook wuxuu ka reebay macluumaad ku saabsan sida uu u wadaagayo xogta WhatsApp
Midowga Yurub wuxuu xaqiijinayaa in Facebook uusan u sheegin wax walba oo la xiriira sida uu u wadaagi doono xogta uu ka heli doono WhatsApp.
Twitter wuxuu tijaabiyaa jabinta ogeysiisyada wararka sida qaraxii ugu dambeeyay ee Berlin
Twitter wuxuu sii wadaa tijaabinta astaamaha. Kuwa ugu dambeeya waa ogeysiisyo ay kujiraan cinwaannada wararka jaban.
MacX DVD Ripper Pro, ku hel barnaamijka ugu fiican ee dooxada DVD-ga bilaash ah
Ma haysaa DVDyo aad jeceshahay inaad jeexjeexdo? MacX DVD Ripper Pro ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee aad rajeyn karto. Ka faa'iideyso hadiyadan Kirismaska ​​iyo qiimaha!
Xarkaha ugu fiican ee muuqaal cusub ka siin kara Apple Watch-kaaga
Maanta waxaan kuu sooqaatay xul ah xirmooyinka Apple Watch, laga soo bilaabo kuwa ugu caansan illaa kuwa asalka ah, laakiin dhammaantood waa kuwo aad u jaban.
Sida Loogu Cayaaro Super Mario Run Jailbreak
Super Mario Run waxaa ku jira xaddidaad kaa hor istaageysa inaad ciyaareyso haddii aad leedahay Jailbreak, laakiin Cydia waxay ku siineysaa xalka khaladaadka ka hortagaya inay ogaato
Dhagax dixeedku wuxuu ku dhawaaqayaa in saacadaha la heli karo ay sii shaqeyn doonaan
Dhagax dixeed ayaa ku dhawaaqay in aysan jirin wax argagax ah maadaama saacadaha Pebble ee hada socda ay sii shaqeyn doonaan.
[Dib u eegis] Tijaabinta Kiisaska Totallee
Dib-u-eegista laba ka mid ah Kiisaska Totallee ee isticmaalka maalin kasta. Ha seegin mid ka mid ah kiisaska ugu khafiifsan suuqa ee sida ugu fiican ugu habboon iPhone-kaaga.
iCareFone, oo lagu beddelan karo iTunes, aaladda wax lagu nadiifiyo iyo waxyaabo kaloo badan oo loogu talagalay iPhone-kaaga
Ma waxaad raadineysaa beddel ka fudud kan iTunes ama qalab dhameystiran oo lagu maareeyo iPhone-kaaga? Tenorshare iCareFone waxay noqon kartaa waxaad raadineysay.
HiRise 2, oo ah saldhigga ugu badan ee lagu dalaco iPhone iyo iPad
Laba iyo tobanka koonfureed waxay dib u cusbooneysiisay saldhigeedu yahay HiRise iyadoo ay la timid naqshad cusub iyo horumarinno ka dhigaya mid aad u kala jaad ah, iyo sidoo kale midabyo cusub oo laga kala xusho.
Apple waxay heshay Tuplejump, oo ah shirkad barasho iyo sirdoon macmal ah
Apple waxay dhowaan heshay shirkaddeedii saddexaad ee barashada mashiinka tan iyo 2015, iyadoo iibsanaysa shirkadda fadhigeedu yahay Hindiya ee Tuplejump.
Facebook Messenger wuxuu soo galayaa bandhiga waxaana laga helaa barnaamijka iOS 10 ee taleefanka
Facebook Messenger waxay saxiixday inay adeegsato CallKit waxayna horeyba uga muuqatay dalabka taleefanka ee iOS 10 si loo sameeyo loona helo wicitaano.
Tilmaamaha Qiimaha ee iPhone 7 ee Bilaashka ah
Ha moogaan hageheena qiimaha bilaashka ah ee iPhone 7 ee qeybiyeyaasha ugu waaweyn iyo qiimaha ugu fiican suuqa.
Netflix waxay qorsheyneysaa inay ku buuxiso buugeeda qulqulka 50% nuxurka asalka ah
Hadafka Netflix waa inuu buuxiyo nus ka mid ah buugyaraha qulqulka ee barnaamijka asalka ah sanadaha soo socda.
8 × 03 Podcast: macOS Sierra iyo imtixaanada walaaca ee iPhone 7
MacOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS Sierra' iyo soo-dejinta ka dib iPhone 7 iyo 7 Plus tijaabooyinka culeyska fekerka iyo fikradaha ayaa ah waxa ku jira barmaamijkeena toddobaadlaha ah.
Google waxay dooneysaa inay ku abaabusho safaradaada barnaamijkeeda Google Trips
Google maanta waxay soo bandhigtay barnaamijkeeda cusub ee Google Trips barnaamijyadeeda iOS iyo Android isku mar. Waxay umuuqataa inaysan jirin jawi ganacsi ...
DisplayMate waxay sheeganeysaa shaashadda iPhone 7 inay tahay tan ugu fiican ee LCD ee ay waligood tijaabiyeen
Falanqeeyayaasha bandhigga DisplayMate waxay xaqiijinayaan in muujinta iPhone 7 ay tahay muujinta ugu fiican ee LCD ee suuqa maanta.
Shixnadaha qaar iyo sii-haysashada iPhone 7 Plus Jet Black ayaa horumarsan
Qaar ka mid ah adeegsadayaasha oo filayey aaladda dabayaaqadii Oktoobar ama Nofeembar waxay arkeen dalabkooda oo isu beddelay "u diyaar garow"
Tweetbot 4 waxaa lagu cusbooneysiiyay taageerada iOS 10 iyo warar dheeri ah
Waxaan kula laabaneynaa cusbooneysiinta macmiilka ugu caansan Twitter ee ku jira App Store, mana ahan wax yar, ...
Space Marshals 2, wanaag ayaa xitaa ka sii fiicnaanaya
Space Marshals 2 wuxuu yimaadaa App Store si loo sii wado guusha qaybta hore, oo leh xulashooyin badan oo hagaajinaya khibrada ciyaaraha.
Bilowga iPhone waa wax dhaafsiisan xad kasta. Jeclaaw ama ha jeclaan, waa tixraaca aan shaki ku jirin ee suuqa ...
Saraakiisha sarsare ee Samsung ayaa lagu qasbay inay soo saaraan bayaan fiidiyoow ah oo ay ku raali galinayaan bulshada tikniyoolajiyadda iyo adeegsadayaasha.
Tani waa sida Puerta del Sol Apple Store u ahaa maalintii la soo saaray iPhone 7
Markan IPhone-ka waxaa laga bilaabay Spain iyada oo ay weheliyaan inta kale ee waddammadii ugu horreeyay, dadweynuhuna waxay uga falceliyeen sidii ay Apple filaysay.
Kaydi2PDF ee iPhone iyo iPad bilaash wakhti xadidan
Codsiga aan maanta ku tusineyno waa Save2PDF, waa codsi noo oggolaanaya inaan ka sameysano faylal qaab PDF ah codsi kasta.
Xayaysiiska ugu horreeya ee iPhone 7 wuxuu muujinayaa kamaraddeeda iyo iska caabbinta biyaha
Apple waxay daabacday ogeysiiskii ugu horreeyay ee ku saabsan iPhone 7, kaas oo aan si cad ugu arki karno in shaqooyinkiisa ugu waaweyn ay yihiin kamaradda iyo iska caabbinta biyaha.
Twitter-ka ayaa joojin doonta tirinta naaneysta iyo xiriiriyeyaasha kala duwan ee warbaahinta ee xaddidaya astaamaha 140
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in Twitter uu joojin doono tirinta xiriiriyeyaasha iyo naaneysyada xadka xaddiga 140, sidaa darteed waxaan ku dari karnaa macluumaad dheeri ah.
Furitaanka ugu horreeya ee iPhone 7 Jet Black iyo sanduuqiisa khaaska ah
Sawirradii ugu horreeyay ee sanduuqii sanduuqa ee iPhone 7 ayaa u muuqda oo sidoo kale muujinaya sanduuqa gaarka ah ee nooca Jet Black ee madow dhalaalaya
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhigga ugu fiican ee u dhexeeya iPhone 7 Plus iyo Samsung Galaxy S7 Edge, labada calan ee suuqa mobilka ee hadda jira.
Kharash 15 daqiiqo ah oo AirPods ah ayaa na siin doona 3 saacadood oo muusig ah
Apple waxay daabacdaa nolosha batteriga ee AirPods cusub, illaa 3 saacadood haddii aan dhigno 15 daqiiqo gudaha kiiska lacag bixinta.
Ireland waxay u jawaabtay Komishanka Yurub: 'Apple deyn naguma lihi'
Ireland waxay Apple kula biiri doontaa rafcaan ka qaadashada Guddiga Yurub ee ah in Apple lagu leeyahay wax ka badan 14 bilyan oo canshuur ah.
Sida laga soo xigtay falanqeyntii ugu dambeysay, iPhone 7 Plus wuxuu bixin lahaa RAM ilaa 3GB ah, oo ka sarreeya 2GB qaabka caadiga ah.
Barnaamijka casriyeynta ee iPhone wuxuu ku sii fidayaa Shiinaha iyo Ingiriiska
Siyaasaddan ganacsi ee ay Apple bilowday inay ka bixiso Mareykanka sanadkii hore, waxay ku fideysaa Shiinaha iyo Boqortooyada Ingiriiska inta lagu guda jiro sanadkan 2016.
Kuwaani waa qiimaha, keydinta iyo taariikhda la sii deyn doono iphone-yada cusub
IPhone 7 iyo 7 Plus waxay la yimaadaan dhowr yaab oo ka badan intii la filayay. Gaar ahaan qiimaheeda, awoodeeda iyo taariikhaha bilaabida.